Cunnada iyo Cuntada - Vondt.net - Bogga 2 ee 16
- Macaaneeye dabiici ah: Jid dhakhso leh oo miisaanka culus leh?
19 / 07 / 2016 /0 Comments/i Cuntada iyo Cunnada, tayada Articles/av waxyeelladayda
Waxa jira dhowr nooc oo beddel ah oo sonkor ah suuqa loogu talagalay kuwa raba inay yareeyaan kalooriyeyaasha cuntadooda. Arrinta la yaabka leh ayaa ah in daraasad cusub oo lagu daabacay joornaalada cilmi-baarista ee unugyada 'metabolism' ay daaha ka rogtay in "cuntada" daabacadaha cabitaannada iyo cunnadu ay kordhiyaan rabitaanka cunnada iyo gaajada - taas oo horseedaysa cunno badan iyo miisaanka oo kordha.
Isticmaalka macaannada, sida sonkorta, ayaa korodhay iyadoo celcelis ahaan culeyska dadka uu kordhayo. Miyaad ogtahay, tusaale ahaan, in qiyaastii saddexdii ninba mid ka mid ahi uu miisaankiisu culus yahay? Sababta ay dad badani u doortaan inay isticmaalaan kuwan waa inay ku jiraan wax kalooriyo ah inta ay siinayaan dhadhan macaan oo la mid ah sonkorta. Marka tani waa inay fiicnaataa, sax?
Daraasad: Wax soo saarka "Cunto" waxay sababi kartaa gaajo
Alaabada loo suuqgeeyo sida "sonkorta la'aanteed", "cuntada" iyo "macaaneeyaha kaliya" ayaa markaa yeelan kara dhadhan dhanaan. Daraasadda cusubi waxay muujisay inay saameyn weyn ku yeelan karaan cunnada iyo dhadhanka.
Daraasaddan ayaa laga sameeyay Jaamacadda Sydney waxayna u muujisay cilmi baadhayaashu inay jiraan aag gaar ah oo maskaxda ka turjumaya macaannada iyo tamar ahaanta cuntada aan cunno. Goobtan ayeyna baarayaasha ka heleen raadinta la yaabka leh.
Markii xayawaannada daraasadda ku jiray lagu quudin jiray cunto ay kujiraan waxyaabo aad u sarreeya oo ka mid ah macaannada macaan-yar, sucralose, waxay cuneen tiro aad u badan oo cunto ah. Raadin la helay ayaa muujisay in macaaneeyaha macmalka ahi uu beddelay dareenka gaajada maskaxda uuna sababay in xayawaanku ay cunaan kalooriyo aad u badan marka la barbar dhigo kooxda xakamaynta. Sucralose waa astaamaha loo yaqaan 'sucrose' waana 650 jeer oo aad uga macaan sonkorta - taas oo si dabiici ah u horseedi karta fasiraadyo xoog leh oo maskaxda ka dhaca, maadaama ay aamminsan tahay inay nuugayso 650 jeer tamar dheeraad ah. Aspartame sidoo kale waa macaan macaan caadi ah oo badanaa lagu isticmaalo Norway.
- Marka maskaxdu aysan fahmin
Sida aan soo sheegnay, waxaa jira fasiraad khaldan markii maskaxdu ogaato in isu dheelitir la'aanta ka dhexeysa macaanka iyo tamarta (kalooriga) - sida aan soo sheegnay, waxaa ku jira sokorta badankood iyo wixii la mid ah ku dhawaad ​​kaloriyada, sida tamar eber. Professor Greg Neely wuxuu sheegay waxyaabaha soo socda:
"Daraasad nidaamsan oo ku saabsan saameyntan, waxaan ku ogaanay gudaha aagga abaalmarinta maskaxda, macaanka waxaa lagu cabiraa tamarta. Haddii uu jiro isku dheelitir la’aan aad u weyn oo udhaxeysa labadan, waqti kadib, markaa maskaxda ayaa dib uqiimeyn doonta oo hubineysa inaad hesho kalooriyado badan. "
- 30 boqolkiiba kalori qaadasho ka badan
Baarayaashu waxay quudin jireen duqsiyada miraha iyagoo leh cunto ay kujiraan shan maalmood. Markii duqsigu loo oggolaaday inuu ku laabto cuntadiisa dabiiciga ah, waxay cabireen qaadashada kalori ee lagu kordhiyay ilaa 30 boqolkiiba.
Kororkan waxaa loo aaneeyey xaqiiqada ah in cunista macaannada macmalka ahi run ahaantii wax ka beddelaan tarjumaadda maskaxda ee heerka macaan - taas oo macnaheedu yahay markii duqsigu ay dib u soo ceshadaan cunnadoodii dabiiciga ahayd, macaankii halkaas ka jiray ayaa si khaldan loo tarjumay inuu si weyn uga sarreeyo sida runtii ahayd. Markaa, maskaxdu way iskeed u taabatay macaaneeyaha macaan ee ay ku tiirsanayd kahor - oo markaa ma uusan fahmin sababta sonkorta, oo 650 jeer ka macaan yar tan sucralose, waxay siisay tamar badan. Daraasadda ayaa markii dambe lagu celceliyay jiirka oo leh isla natiijadii.
- Dheecaannada macmalka ah waxay saameeyaan rabitaanka cuntada iyagoo faragelinaya shabakadaha neerfaha ee adag
Baarayaasha waxay ogaadeen in rabitaanka cuntada iyo gaajada ay ku korodhay shabakad adag oo neerfaha ah. Shabakadani waxay qaylodhaan u tahay haddii aadan helin tamar ku filan marka la barbar dhigo waxaad cuntay.
Marka adoo xakameynaya cuntada, saynisyahano waxay awoodeen inay sawiraan aaggan maskaxda ee horumarsan. Waxay sidoo kale ogaadeen inuu jiro jawaab dhab ah oo ka dhigi doonta cuntada mid dhadhan fiican - oo si joogto ah u cuna wax badan - haddii aad runti baahan tahay.
- Macaaneeyeyaasha macmalka ah ayaa sidoo kale lala xiriiriyay dhowr waxyeelooyin aan wanaagsaneyn
Firfircoonaanta, hoos u dhaca tayada hurdo la’aanta iyo hurdo la’aanta ayaa ka mid ah waxyeelooyinka ay cilmi-baarayaashu ku arkeen kooxda oo ay ku jirto macaan-macaan. Tan waxaa sidoo kale lagu yaqaanaa daraasado kale oo hore loo daabacay.
Adduunyo casri ah oo aan ku dhegannahay arrimo badan oo "cunno" ah annagoo aan runtii ogeyn inay shaqeyneyso, mararka qaarkood waa inaad dhahdaa JOOJI. Markaa, daraasadani waxay muujisay in macaanaynta macmalku kordhin karto halista buurnida - ma yaraynayso. Markaa hadaad isticmaasho sokorta ama cabtid cabitaanno fudud markaa aragtideena shaqsiyeed waa inaad ku dhejin kartaa khaanadda - weligaa. Jirkaaga (iyo BMI) ayaa kaaga mahadcelin doonta taas. Taabadalkeed, iskuday waxyaabo kale duwan oo dabiici ah sida malab, malab sharoobada ama sonkorta aan la sharixin. Haa, waxay u baahan tahay dib-u-habeyn, laakiin waxay ugu yaraan ufiican tahay marka maskaxdaada si caadi ah looga qabsado.
Neely iyo al, 2016
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/Kunstig-søtning.jpg?media=1648573622 396 700 waxyeelladayda https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 waxyeelladayda2016-07-19 08:28:212022-03-18 17:26:35- Macaaneeye dabiici ah: Jid dhakhso leh oo miisaanka culus leh?
6 Noocyada Cuntada ee bixiya Xusuusta wanaagsan
09 / 07 / 2016 /0 Comments/i Cuntada iyo Cunnada, tayada Articles/av waxyeelladayda
Ma ogeyd in noocyada cuntooyinka qaarkood ay cadeeyeen wax ku ool markay tahay xagga hagaajinta xusuusta iyo bixinta caafimaadka maskaxda ee caafimaad qabta? Halkan waxaa ah 6 nooc oo cunto ah oo ay tahay inaad cuntid inbadan haddii aad rabto maskax caafimaad qabta oo caafimaad qabta.
Ukuntu waa mid ka mid ah ilaha ugu wanaagsan ee loo yaqaan 'choline nafaqada'. Cuntada hodanka ku ah choline waxay kuxirantahay xusuusta wanaagsan iyo kordhinta shaqada maskaxda. Ukunta sidoo kale waxay ka kooban tahay borotiin sidoo kale ku siin kara kor u kac dhab ah.
Kalluunka salmon iyo kalluunka kale ee dufanka leh (sida sardines iyo mackerel) waxay leeyihiin heer sare ee DHA (docosahexaenoic acid) iyo EPA (eicosapentaenoic acid), labaduba waa kuwo aad muhiim ugu ah caafimaadka maskaxda wanaagsan. Isku day inaad cuno kalluun saliid leh dhowr jeer usbuucii si aad u horumariso xaaladaha nafaqada ee maskaxdaada.
4. Cagaar buluug ah
Daraasadaha ayaa muujiyey in buluug-cagaarka uu ka hortagi karo luminta xusuusta iyo shaqada maskaxda oo daciif ah. Miraha loo yaqaan 'Blueberries' waxaa loo yaqaan 'Blueberries' sidoo kale waxaa ka buuxa sunta aashitada leh ee waxtar u leh jirka intiisa kale.
Abuurkaani waxay leeyihiin heer aad u sareeya oo zinc ah. Nafaqo leh oo wax ku biirisa fikirka wanaagsan iyo xusuusta. Waxaan kugula talineynaa inaad ku qasmid abuurka bocorka (iyo miraha laxaaska ah) qumbaha badarka ama rootida dubista.
Qaxwaha waxaa ka buuxsamay qulqulka antioxidant-ka, gaar ahaan haddii uu ku sakhraamo qaabkiisa madoow iyada oo aan lagu darin waxyaabaha ay ka mid yihiin sonkorta iyo caanaha. Caffeine, oo qaadasho dhexdhexaad ah, ayaa sidoo kale lala xiriirinaayey hagaajinta shaqada maskaxda. Tani waxay sidoo kale khusaysaa shaaha.
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/sunnere-hjerne.jpg?media=1648573622 422 750 waxyeelladayda https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 waxyeelladayda2016-07-09 11:42:492022-03-18 17:26:176 Noocyada Cuntada ee bixiya Xusuusta wanaagsan
Bogga 2 ee 16<1234>»